DEG DEG: Dhooba-Daareed oo kusii jeeda Dhahar & Madaxtooyada Puntland oo ka shaqeynaysa in loo diido magaalada.
DHAHAR(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Dhahar ee gobalka Hayland ayaa sheegaya in ay Madaxtooyada Puntland amartay in laga hortago safar uu ku tagayo maanta magaaladaas, Afhayeenkii baarlamaanka Puntland CabdiXakiim Dhooba-Daareed oo maalmihii u dambeeyye kusugnaa deegaanada gobaladaas.
Warar ay heshay PuntlandTimes waxay sheegayaan in uu jiray amar ka soo baxay Madaxtooyada oo lasoo marsiiyey gudoomiyaasha gobalada laguna amray in uusan magaalooyinkaas soo gali karin CabdiXakiim Dhooba-Daareed.
Taasi ayaa ahayd caqabad taagneyd shalay oo dhan, ka dib markii lafilayay in uu shalay tago magaalada Badhan ee gobalka Sanaag, waxaana talaabadan aad uga carooday qaar kamid ah taageerayaasha Xildhibaanka.
Gudoomiyihii baarlamaanka Puntland ayaa sidaas oo kale la sheegay in ugu dambeyn maanta iyadoo uu taagan yahay amarkii kasoo baxay Madaxtooyada Puntland uu tagayo magaalada Dhahar oo 50KM ku dhawaad u jirta magaalada Qardho oo uu kasoo jeedo Madaxweyne Siciid Deni.
Ujeedada safarkan ayaa ah latashi uu Dhooba-Daareed la yeelanayo Odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaanada uu kasoo jeedo oo uu kala hadlayo arrimaha ku wajahan dhacdooynkii ka dhacay Garoowe & sidii wada tashi dhameystiran looga yeelan lahaa.